Ny iPhone 11 miaraka amin'ny paoma miolakolaka dia amidy sahabo ho 3.000 Euros | Vaovao IPhone
Ny iPhone 11 miaraka amin'ny paoma miolakolaka dia amidy sahabo ho 3.000 Euros
Toni Cortés | 12/04/2021 16:00 | maro
Handeha ny lohateny hoe "ilay paoma manaikitra ... dia mivoaka mihatsaravelatsihy" aho saingy tamin'ny farany dia nieritreritra indroa aho. IPhone iray manana hadisoana amin'ny famokarana te hahafanta-javatra no amidy tato ho ato 3.000 Euros. Hay nivadika ho azy ny sary famantarana Apple any ambadiky ny fitaovana.
Azo antoka fa tsy dia faly be ilay mpampiasa nahazo an'ity singa kilema ity. Raha mandoa mihoatra ny arivo Euros amin'ny finday ianao dia mitaky azy io ho tonga lafatra. Saingy hendry izy io, ary tsy namerina azy io tany amin'ny magazay ho simba fa nametraka azy kosa entana ny mpanangona. Ary nandeha tsara ny lalao. Haka ny ahy aho ary hikosoka alika amin'ny alikaola ny logo, raha afaka mamafa izany aho. Raha mahazo aho dia hanafatra 3.000 avy any amin'ny elatra….
Ny fizotry ny famokarana fitaovana iray lafo toa ny iPhone dia henjana tokoa, ary ny singa rehetra vokarina dia tonga lafatra. Na saika izy rehetra. Ny sary nalefa tao amin'ny Twitter tamin'ity herinandro ity dia mampiseho ny lesoka tamin'ny famokarana tao amin'ny iPhone 11 Pro, izay mety tsy dia fahita firy toy ny 1 amin'ny 100 tapitrisa.
IPhone 11 Pro tsy diso izay amidy 2700 $. Tsy dia fahita firy ity fametahana diso ity- Hiteny aho hoe 1 amin'ny 100 tapitrisa na mety ho vitsy aza. pic.twitter.com/68F7giZAbm
- Archive anatiny (@ArchiveInternal) Aprily 9, 2021
Nozarain'ny kaonty ireo sary «Archive anatiny»mg Twitter, izay apetaka matetika ny sarin'ireo prototypes sy kojakoja tsy fahita Apple. Ny iPhone 11 Pro asehon'izy ireo dia misy sary tsy izy an'ny Apple ao ambadiky ny fitaovana, satria somary somary ankavanana noho ny tokony ho izy io.
Namidy indray $ 2.700
Ny bitsika dia milaza fa izany iPhone 11 Pro vita pirinty ratsy mety hiseho ho 1 amin'ny 100 tapitrisa izany, na "mety ho vitsy aza." Raha ny kaonty dia amidy vao haingana ity fitaovana ity $ 2.700, vola lehibe lavitra noho ny tena vidiny.
Ny zavatra hafahafa momba azy dia ny nilaza fa ny terminal tsy nety dia nandalo ny fanaraha-maso kalitao ary hahatratra ny mpampiasa farany izy io. Indraindray dia misy ny tsy fahombiazan'ny famokarana, fa ny orinasa kosa dia mikarakara ny manimba ireo singa simba alohan'ny hamaranana ny fizotry ny famokarana sy ny fonosana, mba tsy ho lasa entana mpanangom-bokatra izy ireo, toy ny nitranga tamin'ity tranga ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny iPhone 11 miaraka amin'ny paoma miolakolaka dia amidy sahabo ho 3.000 Euros
Ny fiverenan'i Jon Stewart amin'ny fahitalavitra, miaraka amin'ny Apple TV +, dia ho amin'ny fararano
Apple miasa amin'ny Apple TV vaovao miaraka amina mpandahateny sy fakan-tsary